Sabotsy 04 Jolay 2020. – FJKM
Sabotsy 04 Jolay 2020.
Afaho ao anatin’ny aizina ny olona ka :
1-Meteza hanambara ny mazava (and7)
« Izy tonga ho vavolombelona hanambara ny Mazava mba hinoan’ny olona rehetra noho ny teniny « . Jaona mpanao batisa no tondroin’ny Filazantsara eto, ary i Jesoa kosa no ambara ho « mazava« .Neken’i Jaona am-panetrentena ny hialoha làlana an’i Jesoa , hanomana ny olona handray Azy izay Teny tonga nofo hanafaka ny olona amin’ny fahotana.
2-Aza misandoka ho ilay Mazava (and 8,9)
« Tsy izy anefa no ilay Mazava... » , ny hanambara mialoha ny amin’i Jesoa ary dia notanterahiny araka izany iraka azony izany ny anjara fanompoany sady vitany tsara tokoa, tsy nanao ny tenany ho zavatra izy na nizahozaho : raha tomorina ny Filazantsara dia i Jaona no milaza hoe: « tsy mendrika na dia ny hamaha ny fehin-kapany aza ». izany hoe: na dia nomena anjara i Jaona , tsy nitady naka ny toeran’i Jesoa .Rehefa mitory ianao dia Jesoa toriana , fa aza ianao no mitady haka ny toerany , ny fahefany sy ny voninahiny .
3-Aza kivy raha mandà ny Mazava ny olona (and10)
« …nefa izao tontolo izao tsy nahalala Azy« … » . Izany no ilazan’ny Filazantsara ny toetran’izao tontolo izao eo anatrehan’i Jesoa , nefa na dia izany aza dia hitantsika fa notohizan’i Jaona ihany ny iraka nampanaovina azy na dia teo aza ny olona nibebaka ka nanontany izay tokony hataony , dia tao koa ny olona tsy niraika sy tsy niraharaha akory izay teny notorin’i Jaona .Nisy koa ireo tsy nahazaka ny toriteniny ka tonga hatramin’ny famonoana azy (Mat 14.8-10) . Fampaherezana antsika mitory an’i Jesoa izany na dia misy aza ny mandà , aza kivy fa torio hatrany i Jesoa Zanak’Andriamanitra , Mpamonjy sy mpanafaka.
Hatraiza ny fahavitanao ny anjara fanompoanao?